| Launcher ကို EX UI5.0 Theme GO APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Launcher ကို EX UI5.0 Theme GO
Launcher ကို EX UI5.0 Theme APK ကို GO
အဆိုပါဂန္ UI5.0 ဆောင်ပုဒ်ယခုသင်၏ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ! 200 လှပသောမူရင်းဒီဇိုင်း icon များထက်ပိုလူကြိုက်အများဆုံး apps များလည်းပါဝင်သည်, အသစ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဝေါလ်ပေပါကိုသင်မှတက်သည်။ ဒီအပြင်အဆင်သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုသက်တမ်းတိုးရန်အဘို့အဖွင့်စုံလင်သောပါ!
။ 200 ထူးခြားတဲ့ icon များ (တိုးပွားလာစောင့်ရှောက်) ထက်ပိုပြီး!
။ အသစ်အထူးစိတ်ကြိုက် wallpaper ကို
။ screen resolution ကိုအမျိုးမျိုးမှအလိုအလျှောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
။ သင်၏အထူးသီးသန့် UI5.0 Theme ခံစားခြင်းမပြုမီသတိရပါ, သင် GO Launcher ကို EX သင်၏ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်နောက်ဆုံးပေါ်ခဲ့ကြသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်ပုဒ်ကိုသာ GO Launcher ကို EX အပေါ် run နိုင်ပါတယ်။
။ အဆင်ပြေ UI5.0 Theme MDPI ထံမှ XHDPI အားလုံးကို screen resolution ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
။ လိုအပ်ပါကသင်, မီနူးထုတ်စစ်ဆေး "Themes" ကိုနှိပ်ပါခလုတ်, နှငျ့ "Installed" tab မှာ UI5.0 အဓိကအကြောင်းအရာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
။ သင်ဤဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါကနောက်ထပ်ဘာတွေထူးခြားသေး, အမေရိကန်အီးမေးလ်ပို့ပါ! ကျနော်တို့ ASAP သင်တို့ဆီသို့ reply ပါလိမ့်မယ်။
Facebook မှာ: facebook.com/golauncher
ပြဿနာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြံပြုချက်များစိုးရိမ်ကြသည်။ သင်တို့အဘို့ဖန်တီးမှုပိုကောင်းတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ ကျေးဇူးပြု. !
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်သည်: 2.0 နှင့်တက်
စင်ကြယ်သောက Black Launcher ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ
အဘို့အဦးဝင်း7အဓိကအကြောင်းအရာ ...
ဖုန်းက X များအတွက်အသစ်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ
Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာ
ကျဆင်းလာ: ဂျာမန်လေ့လာပါ။ ဂျာမန်စကားပြောပါ
မီးရှူးမီးပန်းများ Live Wallpaper